musha Oceania Daniel Ricciardo Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Daniel Ricciardo Biography inokuudza chokwadi nezvenyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Nyasha naGiuseppe "Joe" Ricciardo), Mhuri, Hukama, nezvimwe.
Moreso, Hanzvadzi yaDaniel Ricciardo (Michelle), Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro uye mambure akakosha.
Kuita mupfupi Biography yedu, tinokupa iwe mufananidzo wakazara weHupenyu nhoroondo yaDaniel Ricciardo, mutyairi wemuItaly-Australia Formula One mujaho.
Yedu Biography inotanga kubva panguva yake yekuzvarwa kusvika ave simba rekutarisa mumutambo wemujaho.
Kuti urodze rudo rwako rweBiography yedu, isu tinopa iyo gallery nzira yezviitiko zvakatenderedza nhoroondo yehupenyu hwaDaniel Ricciardo.
Daniel Ricciardo Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva paudiki kusvika pakubudirira kwake.
Ehe, isu tinomuziva iye kune kwake-kwese kumhanya neinonakidza racing. Haatombotya kusundira kune muganho. Zvisinei nekurumbidza kwake, vashoma chete vateveri vakaverenga chidimbu chidiki cheDaniel Ricciardo's Biography.
Naizvozvo, isu tazviona sezvakanaka kuti tikushandire iwe inonakidza nyaya yaDaniel Ricciardo. Zvakare, iko kuparara kwechiitiko chake chemitambo kusvika parizvino. Zvino, pasina kunonoka, ngatitangei.
Daniel Ricciardo Childhood Nhau:
Kutanga, Daniel Joseph Ricciardo akazvarwa musi wa 1 Chikunguru 1989 kuna amai vake, Grace Ricciardo nababa, Giuseppe "Joe" Ricciardo. Nhoroondo yedu yeAustralia yakazvarwa muSouth West Land Division yeWestern Australia.
Kwaakaberekerwa, Perth yakafanana nenzvimbo yekuzvarwa Heath ledger. Daniel Ricciardo akaberekwa pakati pehanzvadzi yake (Michelle).
Vakaberekwa kubva kumubatanidzwa wababa vavo, Giuseppe Ricciardo naamai, Nyasha, vane mapikicha atinoratidza pazasi.
Mufananidzo weVabereki vaDaniel Ricciardo - amai, Grace Ricciardo nababa, Giuseppe Ricciardo.
Vabereki vaDaniel Ricciardo vakamurera muDuncraig. Nzvimbo iyi ndeimwe yemaguta ekuchamhembe ePerth. Amai vake vakabata ndangariro dzake dzekare kutarisa baba vake, Joe Ricciardo, mujaho paBarbagallo Raceway iri padyo muWanneroo.
Isu tinofungidzira kuona baba vake vachimhanya kunofanira kunge kwakawedzera chido chemutambo. Saka, Daniel Ricciardo akatanga karting pa9.
Akatanga senhengo yeTiger Kart Club (TKC). Kubva ipapo, akatora chikamu mune zvakasiyana-siyana karting zviitiko.
Daniel Ricciardo, achiri mudiki nemota yake.
Daniel Ricciardo Yemhuri Mhemberero:
Vatyairi vemujaho havafanirwe kubva kudzimba dzemamirionea. Zvakangodaro, iwe unogona chete kuve wakapfuma zvakakwana kuti upinde mumotorsports. Huwandu hwakanaka hwemari buoyancy hwakanyanya.
Baba vaDaniel Ricciardo, Giuseppe, vaimbove mujaho. Vaive vemhuri yepakati, vaishanda nesimba. Saizvozvo, vaive nezvakaringana kutarisira zvavaida zvakakosha.
Daniel Ricciardo Mhuri Kubva:
Daniel Joseph Ricciardo akaberekerwa muguta rechina reAustralia rine vanhu vakawanda, Perth. Vabereki vake vaive nerudzi rweItaly-Australia.
Baba vaDaniel, Giuseppe "Joe" Ricciardo, vakaberekerwa muFicarra (Messina) muItaly. Kunyange zvakadaro, akatamira kuAustralia nemhuri yake aine makore manomwe.
Sezvineiwo, amai vaRicciardo vekuAustralia vakaberekwa Grace vaive nevabereki vanobva kuCasignana (Calabria) kuItari.
Kunyangwe zita rake, Ricciardo, ndere kuItaly. Pasinei naizvozvo, anotaura zita rake "Ricardo."
Parizvino, Daniel Ricciardo ane vese vekuItaly neAustralia madzitateguru. Iye akaregeredza kududzwa kweItaly "Rit-chi-ardo." Danieri anoshuma, zvakadaro, ndiwo matauriro anoita mhuri yake. Nekudaro, iye muItari -Australia.
Zvakawanda zviri kutaurwa, anobva kuPerth kuWestern Australia. Kunze kwezvo, vagari vazhinji muPerth imhuri dzeItaly.
Takaratidza mufananidzo pazasi kubatsira kunzwisisa mhuri yaDaniel Ricciardo.
Mufananidzo unoratidza Mhuri yaDaniel Ricciardo kwakatangira.
Daniel Ricciardo Basa Rekutanga:
Sezvambotaurwa, Wechidiki chap akatanga Karting aine 9. Zvisinei, muna 2005, akapinda muWestern Australia Formula Ford Championship. Akaityaira ane makore gumi nemashanu Van Diemen, achipedza sere nekupera kwemwaka.
Kusvikira kumusoro kwemwaka, akakwikwidza pamutambo wenyika Formula Ford. Ricciardo akatora akatorwa ane makore gumi nematatu Van Diemen kuyambuka kuenda kuSandown Raceway kuMelbourne.
Kunyange zvakadaro, motokari yake yakwegura yakanga isingakwikwidzi. Saka akapedza ari wechi16, wechi17 ndokuzorega pamakwikwi matatu ekupera kwevhiki.
Gore rakatevera, zvakadaro, akahwina bhezari mumakwikwi eFormula BMW Asia neEurasia Motorsport.
Ricciardo achiratidza mibairo yehudiki hwake kuenda-karting basa.
Daniel Ricciardo Dzidzo:
Mudiki uyu akapinda chikoro chesekondari kuNewman College. Chikoro ichi chiri pre K-12 co-dzidzo yeKatorike chikoro chinoshanda mutsika yeMarist.
Zvakadaro, sevamwe vaKarters, aifanira kusiya zvidzidzo kuti aenderane nemitambo yake.
Nekuda kweizvozvo, vanofanirwa kunge vakatorawo chikamu kumba Chikoro. Zvakare nedzidzo isina kurongwa yaiitirwa vatambi zvakafanana.
Mufananidzo unoratidza Daniel Ricciardo nevamwe vadzidzi kuNewman College.
Daniel Ricciardo Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Aive nemutambi wake pa2011 British Grand Prix nechikwata cheHRT. Icho chaive chikamu chebvumirano neRed Bull Mujaho, waakange ari kuyedza kutyaira pasi pechikwata chehanzvadzi yake Scuderia Toro Rosso. Munguva yake yekutanga mwaka, akawana mbiri dzakakunda (zvese kuBira).
Daniel Ricciardo akahwinawo chinzvimbo chinzvimbo muZhuhai. Akapedza wechitatu mukati meDhiraivho 'Chikwata nemapoinzi makumi maviri nematatu. Daniel Ricciardo akapedza makumi mashanu nemapfumbamwe kumashure kwemhare Earl Bamber.
MunaAugust gore rimwe chete, ivo vakamupa kubuda neMotaworld Racing. Aifanira kukwikwidza pamusangano wechisere wemakwikwi eFormula BMW UK.
Kunyangwe achirega basa pachiitiko chekutanga, Daniel Ricciardo akapora kuti apedze sere mune yechipiri. Akatora mapoinzi matatu emakwikwi mukungopinda kwake chete mumakwikwi eBritish.
Pamusoro pegore, akapinda muFormula BMW World Final naFortec Motorsport. Daniel Ricciardo akapedza ari pachinzvimbo chechishanu, masekondi gumi nemana kubva mukukunda Christian Vietoris.
Muna 2012 Ricciardo akabatana naToro Rosso yakazara nguva. Mushure meizvozvo, timu yakachinja mutyairi mutsara. Akafambisa mota yeFerrari-inofambiswa kwavari muna 2012 na2013.
Pakazosvika 2014, mutambi weAustralia akakwidziridzwa kuenda kuRed Bull. Yakanga iri sechinzvimbo cheakasiya basa Mark Webber.
Uye zvakare, akawanda-nguva nyika shasha Sebastian Vettel. Ndipo paakaita kuhwina kwake kwekutanga kuCanadian Grand Prix.
Kutanga kukunda kwaDaniel Ricciardo kuCanada Grand Prix muna2014.
Daniel Ricciardo Biography- Kumuka Mukurumbira:
Ricciardo akabuda wechitatu mumakwikwi mumwaka wake wekutanga neRed Bull pasi pesimba reRenault. Akaita ake matatu ekutanga Formula One anokunda muCanada, Hungary neBelgium.
Mushure memakore maviri pasina kukunda, Ricciardo akadzokera kumusoro kwepodium pa2016 Malaysian Grand Prix. Akazopedzisira ave wechitatu mumakwikwi kechipiri mumakore matatu pa2016 Mexican Grand Prix.
Akanga awedzera kukunda kweRed Bull kuAzerbaijan Grand Prix muna 2017. Zvakanyanya kuMonaco Grand Prix Chinese neMonaco Grand Prix muna 2018.
Mushure me2018, Ricciardo akasaina neRenault. Akatora chikamu mavari mumwaka we2019 uye 2020.
Kupemberera kukunda paMonaco Grand Prix muna 2018.
Daniel Ricciardo akabatana naMcLaren wemwaka we2021 uye 2022 Formula One mwaka, pamwe naLando Norris. Iye anotarisira chitsauko chitsva nechikwata cheMercedes-powered McLaren timu. Ricciardo ane chokwadi chekuramba achinyemwerera.
Sezvineiwo, akawana kuhwina kwake kwekutanga naMcLaren ku2021 Italian Grand Prix. Iko kukunda kwekutanga kwechikwata kubva 2012 Brazilian Grand Prix uye yekutanga 1-2 kupera kubvira 2010 Canada Grand Prix.
Kuwedzera. Vatambi 'kukunda kwechisere muF1 yakazara -Moreso kukunda kwekutanga kwaDaniel kubvira 2018 Monaco Grand Prix. Ona chikamu chekumuka kwake mukurumbira pazasi.
Iyo 2021 Italian Grand Prix:
Isu takaziva zviri pamutemo mujaho weFormula One wemotokari seFormula 1 Heineken Gran Premio d'Italia 2021. Yakaitika musi wa12 Gunyana 2021. Chiitiko chakaitirwa kuAudodromo Nazionale Monza.
Ndiyo 14th kutenderera kweye 2021 Formula One World Championship. Zvakare, yechipiri Grand Prix muItari, mushure meEmilia Romagna Grand Prix musi wa18 Kubvumbi.
Pfungwa kubva kuRace:
Makwikwi akatanga pa15: 00 Central Central Zhizha Nguva (CEST) musi wa12 Gunyana. Daniel Ricciardo akapfuura Max Verstappen, achitungamira chiitiko chacho. Zvichakadaro, Lewis Hamilton akapfuura Lando Norris achitora chinzvimbo chechitatu.
Hamilton akaedza kubata paVerstappen asi akasundirwa padivi. Akarasikirwa nenzvimbo dzake kuna Verstappen naNorris. Kuenderera mberi pasi neiyo grid, Antonio Giovinazzi akabuda munzira uye akajoinazve iyo nzira munzira yaCarlos Sainz Jr., nevaviri vachikurukura.
Verstappen paakanga ari mumakomba, Hamilton akatora Norris, zvichiita kuti Norris arove. Vakasvetukira Giovinazzi, akarasika bapiro remberi.
Ricciardo akabata Verstappen kumashure kwemakumi maviri nerimwe kusvika arovera matayi akaomarara pamakumbo makumi maviri nemaviri.
Norris akabva atora Verstappen. Hamilton akaguma padivi-ne-parutivi neVerstappen pakubuda kwegomba.
Zvisinei, Verstappen akasvinwa muchikamu 2. Akave nekukonana kudiki neMota yaHamilton. Vese vatyairi vaive vasina kukuvara uye vaifanira kusiya mutambo.
Sergio Perez kuyedza kupfuudza Leclerc mashoma apera asi akazobuda munzira; Perez akatora chinzvimbo chechitatu kubva kuLeclerc.
Pakupedzisira, Ricciardo akapedza kekutanga, achihwina mujaho wake wekutanga kubvira 2018 Monaco Grand Prix.
Iko zvakare kuhwina kwake kwekutanga kwaMcLaren kubvira Jenson Button akaita ku2012 Brazilian Grand Prix. Isu takapa clip inoratidza zviri pazasi.
Ndiani Daniel Ricciardo Kufambidzana?:
Mutambi weAustralia akanyanya kuchengetedza hupenyu hwake hwepachivande chakavanzika. Ari muhukama hwakareba-nehupenyu hwake hwehucheche mudiwa, Jemma Boskovich. Zvisinei, vaviri vacho vakaputsa muna 2016. Zvekare, akasangana nemumwe Mukadzi, Annemarie Horbass.
Iye ndiye waaimboshanda naye Red Bull. Iyo stunner yekuGerman yaimbove nyanzvi manejimendi manejimendi yeiyo Eventureline. Red Bull yamushandira.
Tinoona vaviri ava vachipembera pamwe chete zvichitevera kukunda kwake muMonaco gore rapfuura. Ivo vaive pamwe nekuonekwa vakagara padhuze nepadhuze yavo yepamusoro yacht zuva rakatevera.
Collage yaDaniel naJemma Boskovich uyezve naAnnemarie Horbass.
Zvisinei nekuzeza kubva pane zvinopenya, akaita misoro yenhau paakasangana nebrunette anoshamisa, Jessica Gomes.
Ane mukurumbira saRicciardo. Ukama hwavo hwakatanga muna December 2018. Zvinosuruvarisa, ngarava yavo yakanyura. Fungidzira kuti achiri single.
Zvimwe pamusoro paJessica Gomes:
Jessica akazvarwa musi wa25 Gunyana 1984 kuna amai vanobva kuHong Kong uye baba vechiPutukezi. Iye chizvarwa cheSydney. Semuenzaniso, iye akateedzera kune mashoma makuru vatengi munyika.
Gomes anoratidzwa muSwimsuit Issue yeSports Illustrated makore masere achisainwa kuIMG Models.
Akagadzira zvakare Hyundai neLG. Gomes anga ari pahwindo guru, achionekwa muVogue uye Victoria's Secret.
Akaonekwa pamwe chete naBruce Willis mumuvhi, Pane Imwe Nguva muVenice. Aive achitariswa zita-rwiyo muKanye West rwiyo.
Mufananidzo wepakutanga waDaniel zuva, Jessica Gomes.
Daniel Ricciardo Mhuri Chokwadi:
Pane hukama hwakanaka pakati penhengo yega yega yemusha wavo. Kunyanya kunyanya baba vake, Joe, amai, Nyasha uye hanzvadzi, Michelle. Daniel akanakidzwa nerutsigiro ruzere kubva paUdiki.
Aingogona kusvika apa nekuratidza kwavo rudo uye nehanya zvikuru. Kunze kwezvo, anofarira songaniro yemhuri yapedyo neshamwari.
Hukama nemuzukuru wake hunosekesa. Zvino, ngatimbonyatsoongorora nhengo imwe neimwe yemhuri yake.
Nezve Baba vaDaniel Ricciardo - Giuseppe "Joe" Ricciardo:
Baba vaDaniel Ricciardo, Giuseppe "Joe" Ricciardo, anoda Sports. Chido chaRicciardo chemujaho ndechekuti kuna baba vake uye vhiki yake yevhiki yaakashandisa munzira. Kufanana kwake nemutambo wemujaho kunofanirwa kunge kwakabatirira pana Daniel kutanga.
Baba vake vakamhanya, kwete senge kupenga kukwikwidza, kwete sebasa. Nekudaro, chaigara chiri chinhu chaainakidzwa uye chaaiitira kunakidzwa. Akapinda makwikwi maviri muAustralia Sports Sedan Championship muna 1980.
Mufananidzo wekutanga waJoe Ricciardo nemwanakomana wake, Daniel vachishanda pamotokari.
Zvakare, akatora chikamu munaKurume 73B (Ford BDA) kuFormula Pacific Australia muna 1981. Zvakare zvakare, muna 1982, akamhanya kuMacon kumakwikwi eAustralia Driver. Mr Ricciardo vapinda mamwe akawanda marudzi. Akamhanya kuAustralia Sports Sedan Championship mu1999.
Uyezve, Joe akapinda mumijaho mitatu muna 2014. Akachengetedza chinzvimbo che19 nemapoinzi makumi maviri nematatu. Pamusoro pezvo, akauya pachinhanho chegumi nenhanhatu pa23 Hawthorn Trophy neHWN F16. Akapinda makwikwi mashanu muna 2015 zvachose.
Moreso, mwanakomana waJoe Ricciardo, Daniel Ricciardo, akareurura kuti iye mutyairi ari nani kupfuura iye. Nekudaro, Joe anosanganisira mukuchera pasi kuti awane kurarama.
Mufananidzo naamai, Nyasha nababa, Joe mushure mekukunda kuMonaco mu2018.
Nezve Daniel Ricciardo Amai - Nyasha Ricciardo:
Giuseppe "Joe" Ricciardo akaroora kunaGrace Ricciardo kweanopfuura makore makumi matatu ikozvino. Ivo vaviri vane vana vaviri pamwechete. Ivo vanosanganisira Daniel naMichelle. Amai vaDaniel Ricciardo, Grace, vanga vari mudzimai anotsigira uye amai.
Ndiye iye aigara achitora Danieri kunoona baba vavo vachimhanya. Aichengeta imba, zvakare achizadzisa zvizhinji zvezvinodikanwa zvemanzwiro aDaniel Ricciardo.
Nyasha anogara aripo munzira, achienda kumakwikwi emwanakomana wake. Akamutsigira kubva pamazuva ake ekutanga kukamba. Nekudaro, iye anochengetedza hupenyu hwakanyarara.
Pix yaDaniel naamai vake, Grace Ricciardo.
Nezve Daniel Ricciardo Sista - Michelle:
Michelle ndiye chete munin'ina waDaniel Ricciardo uye hanzvadzi. Iye ndiamai vevana vaviri vadiki. Yake yekutanga ndeye3, nepo yechipiri iri imwe. Daniel anoda vana vaMichelle zvakanyanya. Taigara tichimuona mumifananidzo achitamba navo.
Iye anogara achitsigira munin'ina wake sezvo achigara achikwikwidza mumitambo yemijaho. Michelle anoratidza rutsigiro rwake kuburikidza nevezvenhau.
Mufananidzo unonyemwerera nemunin'ina wake chete. Michelle.
Nezve hama dzaDaniel Ricciardo:
Mutyairi wemuItari -Australia anomhanya ane hama. Kunze kwababa vake, amai, uye hanzvadzi. Daniel Ricciardo ane mashoma mashoma emhuri. Ana babamunini, vanatete, nasekuru nasekuru.
Nekudaro, isu tichiri kuzowana ruzivo rwakasimba pamusoro pavo. Daniel anoda hama dzake uye anogovera nguva yakawanda navo. Vanosangana kunyanya pazuva reKisimusi pakudya kwemanheru. Danny anovafarira, kunyanya vazukuru vake.
Ona kuti Dhanyeri anoda sei kutamba neMuzukuru wake.
Daniel Ricciardo Hupenyu hweMunhu:
Iyo Australian Champion haina kujeka kunze. Zvakasiyana, zvehasha mukati. Ricciardo anokunda akavimbiswa.
Anogona kugara achipedzisa pakupera kwebhizinesi kwetafura yeshasha. Ari kure nenjanji, Daniel anofarira kuchovha makomo uye kukwira.
Ini ndinoda maJumps, anodaro. Mutambo wacho unotora imwe-munzira uye muchidimbu chechisikigo. Pamusoro pezvo, anofarirawo kushambira, basketball, mabhaisikopo, mumhanzi, uye nekudaro anoimba zvakanyanya mushawa. Zvakarezve, iye anoda komedhi (Adam Sandler) uye Skydiving.
Ricciardo neshamwari yake pazororo pamusoro pegomo.
Daniel Ricciardo anotya madandaude uye anofarira kudya chokoreti. Zvakare, Daniel Ricciardo anofarira kutamba nhabvu. Saka, anotsigira yeAustralia Nhabvu Nhabvu (AFL) yeWest Coast Eagles. Daniel aive akabata tikiti-imwe tikiti mubati mu2015 na2016.
Uyezve, Daniel Ricciardo anotora mukana wevezvenhau. Ipuratifomu inomubatsira kubvarura mukaha nevateveri vake. Anogovana mafoto kubva pakurovedza kwake, zvidimbu zvemutambo wake wemujaho, uye zvigadziriso zvinouya.
Daniel Ricciardo Mararamiro:
Kunyangwe hazvo Daniel Ricciardo achiwira muboka remukurumbira revatyairi veF1, anofarira kuramba asingazivikanwe. Zvakare, isu tinoziva nezve aya mararamire ehupenyu evazhinji vatyairi veF1. Izvo zvinowanzo sanganisira kuwana zvakavanzika jeti, shanu-nyeredzi dinner, dzimba dzepamusoro uye mota dzinokurumidza.
Asi ipapo Ricciardo anochengetedza hupenyu hwakareruka uye hwakanaka. Nekudaro, munaNovember 2018, Daniel akashandisa mamirioni mapfumbamwe emadhora kutenga imba muBeverly Hills. Iye zvakare ane mashoma anodhura mota senge Bentley, Renault.
Ricciardo mune yake inotonhorera yebhuruu McLaren 720s dandemutande inokwana $ 315,000.
Sezvakamboitika, kondirakiti yemutyairi nechikwata zvakavanzika kwazvo, pasina ruzivo rweveruzhinji nezvekunetseka kwechibvumirano. Chibvumirano chake chemakore maviri neRenault chaimubhadhara $ 35 miriyoni pagore. Zvimwe zvinosanganisira madhora emamiriyoni matanhatu pagore neRed Bull.
Nekudaro, muhoro waRicciardo uri padyo ne $ 27 miriyoni, sekureva kweForbes. Ane zvibvumirano kubva kumakambani seGoPro neBlue Coast. Iwo ma endorsement anosimudzira mambure ake anokosha kusvika $ 60million, maererano nezvinyorwa zvezuva nezuva. Akasaina chibvumirano naRenault mugore ra2018.
Daniel Ricciardo Untold Chokwadi:
Kunze kwemashoko ari pamusoro apa, pazasi pane mashoma anonakidza echokwadi angafadza zvaunofarira nezvaDaniel Ricciardo.
Chokwadi # 1: Chikwama chaDaniel Ricciardo:
Ngowani yaRicciardo yakasarudzika dhizaini. Anoramba kutevera tsika yechinyakare. Ngowani yake ine, Nayo, "Iyi ndiyo migwagwa yangu" meseji. Dzimwe nguva ne "Zvakanaka Zvese Nzira." Meseji ndeye kutsigira hutano hwepfungwa.
Iye anotsigira charity Mindset. Iyo yakasarudzika mint-yebhuruu ngowani inoratidzira misodzi-yekuita dhizaini, ichiratidza yakasviba mimvuri yebhuruu uye chena pasi.
Ngowani yaRicciardo yakasarudzika dhizaini.
Chokwadi # 2: Huchi badger:
Tinowanzomuti “mbira.” Zvinoenderana nemaitiro ake emujaho. Huchi badger imhuka isingatyi mune mhuka mhuka. Ukazvitarisa, anoita kunge akanaka uye akanaka.
Asi zvino, kana munhu achangoyambuka dunhu rake, anobva ave noutsinye. Iye achatevera chero chinhu, kunyangwe ingwe, shato. Anotendeuka nekukurumidza. Zvisinei, iye murume akanaka.
Chokwadi # 3: Nhamba 3:
Daniel Ricciardo akakura seanofarira Dale Earnhardt. Dale ndiye mutyairi weNASCAR Cup Series. Nekudaro, nhamba yake yekumhanya yaive 3. Kuda kwaDaniel kumutyairi weNASCAR kwakamukonzera kuti atorewo nhamba 3. Ricciardo akagamuchira nhamba 3 mukumukudza.
Ricciardo akagamuchira iyo nhamba 3 mukuremekedza Dale Earnhardt.
Chokwadi # 4: Kupemberera chiratidzo:
Ricciardo akabhabhatidza nhanho kutenderera pasirese nekusimudza kwetsika yeAussie inozivikanwa se 'Shoey.' Inosanganisira kunwa champagne kubva kune soggy racing boot. Hongu, zvinofadza, asi mhemberero yekutengesa inoratidza kuti nei vateveri vake vachimuda.
Mutyairi weAussie F1 anopemberera mapodhiyamu nekumwa champagne kubva mushangu. Kana usiri kujairana ne "shoey," itsika yekunwa. Iyo inoratidza kwake kuseka asi haimbofa yakamuderedza iye panzira.
Iyo Shoey ndeyetsika yeAustralia mupiro kune epasi rese motorsport. Yakave inozivikanwa pamabiko ekuzvarwa, mhemberero uye zviitiko zvinosanganisira yakawanda yekunwa. “Kuita shangu” kudururira doro mushangu uye kurizadza — chinwiwa chinodonhedza hembe yako.
Mutyairi weAussie F1 anopemberera mapodhiyamu nekumwa champagne kubva mushangu.
Chokwadi # 5: Wechidiki Mutyairi Chikoro:
Daniel Ricciardo Mudiki Mutyairi Academy inotarisira kudzidzisa vatyairi vechidiki. Pfungwa ndeyokupa vatyairi vedu vasina ruzivo chivimbo chekubuda uye kunakirwa nevekunze mujaho wedunhu mune yakakodzera mujaho kart kekutanga.
Zvirongwa izvi zvinotanga nekirasi yekuchengetedza kuchengetedza kuvadzidzi. Wobva wafamba munzira munzira mumotokari sevapfuuri vane murayiridzi kuratidza gomba rekubuda nekupinda, mitsetse yekumhanya uye mabhureki mabhureki.
Iyo Danieri Ricciardo Mudhiraivha Chikoro chinoshandisa DRS50 Bambino kwemakore matanhatu kune vane makore masere ekuberekwa. Zvakare, iyo DRS8 yemakore masere kune vane makore gumi nemaviri-ekuberekwa. Ipapo, DRS62 yemakore gumi nemaviri kusvika kune gumi nematanhatu-vane makore ekuberekwa.
Iyo Daniel Ricciardo Young Mutyairi Academy inoshandisa sisitimu yemakoni kutenderera dunhu kuratidza uye kutungamira vasina ruzivo vatyairi pamabhureki avo nekoni magedhi ekupinda kukona yega yega kudzidzisa mujaho wekumhanyisa uye kugadzirisa epex emakona.
Mufananidzo nevadzidzi paDaniel Ricciardo Mudhiraivho Wechidiki Mutyairi.
Chokwadi # 5: MaTatoo ake:
Daniel akawana tattoo yake yekutanga mu2013. Kubva ipapo, ari kuwana inked yave tsika yaRicciardo. Iye wekuAustralia akagamuchira maTatoo akawanda zvekuti anogona kunge akatadza kuverenga. Daniel anofungidzira kuwanda kwematatoo pamuviri wake anosvika makumi maviri.
Iyo inokatyamadza kuunganidzwa kwetattoot izvo zvaDaniel zvaari zviri pazvidya zvake. Kutanga, mumwe wemumhanyi wechikadzi uye uyo anoverenga 'amai nababa.' Yetatu, imwe yengarava uye mazwi anoverenga 'chete ndangariro' (yake yekutanga muna 2013). Pekupedzisira, mumwe wevaviri vachitsvodana.
Muunganidzwa waRicciardo unonakidza kwazvo wematoto pazvidya zvake.
Chokwadi # 6: Zvinyorwa Zvinyorwa:
Chinyorwa chinyorwa chakaburitswa mukubatana pakati peNetflix neFormula One. Iyo docuseries inonzi Fomula 1: Dhiraivha Kuti Upone. Inovavarira kupa kumashure-kwe-zviitiko tarisa kune vatyairi nemakwikwi eFormula One World Championship.
Mwaka wechitatu wakamirirwa wezvinyorwa zvakaburitswa paNetflix pakutanga kwaKurume 2021.
Kukunda kwaDaniel Ricciardo kuItari Grand Prix kwakaratidzwa mune zvinyorwa.
Nekudaro, anga asingafare nechimwe chinhu chakaedzwa neNetflix mune imwe episode. VaAustralia vakafunga kuti Dhiraivha yeKupona zvine simba vakaedza kukonzera kukakavara pakati pake naCarlos Sainz.
Daniel Ricciardo Biography Pfupiso:
Tinovimba iwe wakachengetedza Daniel Ricciardo Biography kusvika zvino. Nekudaro, nekutarisa, shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezve yedu yeItari -Australia F1 Mutyairi.
Zita rizere: Daniel Joseph Ricciardo
Zita rekudanwa: Danieri, Hugger
Zuva rekuzvarwa: 1st Zuva raJuly 1989
Nzvimbo yekuzvarirwa: Perth, Western Australia
Chikwereti: British Grand Prix (2011)
Kutanga kukunda: Canada Grand Prix (2014)
Matimu: Renault (2020), McLaren-Mercedes (2021)
Dzidzo: Newman Koreji
Baba: Giuseppe "Joe" Ricciardo
Amai: Nyasha Ricciardo
Hanzvadzi sikana: Michelle
Ex-Vasikana Shamwari: Jemma Boskovich (2016), Annemarie Horbass (2017), Jessica Gomes (2018).
Hobbies: Kukwira mabhasikoro, Bhora, Basketball, Kushambira, mafirimu uye kuteerera mimhanzi.
kukwirira: 5 ft 8 mu (1.78m)
Muhoro: $ 27 mamirioni (anorambidza)
Mvumo: $ 2 mamirioni (anorambidza)
Social Media: www.facebook.com/DanielRicciardo, twitter.com/danielricardo, www.instagram.com/danielricciardo.
Mukuvhara iro raDaniel Ricciardo's Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu Nyaya, Tinovimba wakadzidza zvishoma zvidzidzo. Kunyangwe zera diki raDaniel Ricciardo sekarter, akachengeta mwero wekugona. Iye akatevera kuburikidza neiyo mwero wekugona kuburikidza nebasa rake rakaoma.
Moreso, kutarisisa kwake uye kutsunga. Zvakanaka, ndinotenda zvakare nerutsigiro ruzere kubva kumhuri yake, kunyanya baba vake. Daniel Ricciardo aigona kudzidza pasina nguva izvo zvaizotora vamwe kwenguva yakareba.
Isu tinotenda kuti iwe wawana iyi memoir inokwezva. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neyekutanga-kirasi mhando.
Dai 22, 2022